Vaovao - Nahasarika ny saina ny fiakaran'ny vidin'ny mpandresy API amin'ny telovolana fahatelo
Nahasarika ny sain'ny olona ny fiakaran'ny vidin'ny mpandresy API amin'ny telovolana fahatelo
Ny fampiroboroboana ny indostrian'ny API sy ny indostrian'ny fanafody dia tsy azo sarahina, ary tsy miovaova. Fantatra fa noho ny fanaraha-maso ny tontolo iainana miha henjana dia mila manatsara ny fizotrany na manena ny ambaratongam-pamokarana ireo mpamokatra API izay hitarika ny fiakaran'ny vidin'ny API. Ankoatr'izay, ireo mpanamboatra akora simika any ambony an'ny API dia miatrika olana iray ihany koa. Orinasa API vitsivitsy ihany no afaka mamokatra vokatra sasany, izay mamorona tarehin-javatra oligopoly. Ny fiakaran'ny vidin'ny API koa dia hisy fiantraikany amin'ny orinasa fivarotam-panafody amin'ny lafiny iray. Raha ny filazan'ny indostria dia mirongatra ny vidin'ny akora, ary mitaraina hatrany ny orinasa fivarotam-panafody any ambany, izay misy fiatraikany mivantana amin'ny fanafody ataon'ny marary.
Ny asan'i Zou pingming Xinghua dia ny rohy ambony amin'ny indostrian'ny fanafody, ary manahy mafy ny amin'ny fiakaran'ny vidin'ny API izy. Vao tsy ela akory izay, dia notaterina fa ny fitantanan-draharaha misahana ny fanaraha-maso ny vidin'ny Fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny fanaraha-maso ny tsena dia nanankina ny fikambanan'ny indostrian'ny zava-mahadomelina China hikarakara fiaraha-miombon'antoka amin'ny famatsiana akora ho an'ny orinasa mifandraika amin'izany hanatrika ny efitrano fivoriana an'ny State Administration of fanaraha-maso ny tsena. Ny mpitarika ny birao fanaraha-maso ny vidiny sy ny Birao Anti Monopoly ao amin'ny Fitantanan-draharaham-panjakana misahana ny fanaraha-maso tsena dia nanana fifanakalozana sy fifandraisana lalina tamin'ny solontenan'ny orinasa mpandray anjara amin'ny olana amin'ny vidiny sy ny famatsiana API.
Ny Zouping Mingxing simika dia hibaiko ny fironana miovaova amin'ny API ao anatin'ny lamin'ny politikam-pirenena sy ny fitsipiky ny tsena manerantany, mba hanadiovana sy hampiorenana ny tontolon'ny tsena manerantany.